Dhageysiga 3 ee kiiska musiibooyinka Çorlu; Degmada Çorlu ee Tekirdağ, 25 dad ayaa ku dhintey, 328 dad ayaa ku dhaawacmay shil tareen 3'inci ayaa bilaabmay. Istaanbuul ayaa ka socota degmada Uzunköprü ee Edirne Halkalı'ama [More ...]
Ma jiri doontaa xarun tareenka degmada G inrsu ee Bursa?; Intii lagu guda jiray xafladda aas-aasiga ah ee lagu qabtay 2012, hal xarun tareen oo loo yaqaan '2 train' ayaa la sii saadaalinayay Bursa, mid Balat iyo tan kale ee Gürsu.Gurinta Gürsu waxaa loo wareejiyay dhul banaan oo u dhow Kazıklı oo ku yaal wadada loo yaqaan 'Ring Road to yapıl in la dhiso' si looga hortago waxyeelada meelaha beeraha. ee la soo dhaafay [More ...]
Su’aal Muhiim ah oo Corlu Tareenka Burburkiyo Sidee Ballast Worn?; 7 25, maxkamad wareegii saddexaad ee kiiska eedaysanaha ee 4, oo laga furay Çorlu oo ku saabsan shilka tareenka ee ilmuhu ku dhintay 10, ayaa la qaban doonaa bisha Diseembar. Warbixinta khubarada cusub [More ...]
tareenada-xawaaraha sare TCDD Gaadiidka Inc. ee Siemens Jarmalka (YHT) ka set ugu horeysay, soo baxay shalay on Kapıkule ka Europe Turkiga ku amray. 2020 oo ka mid ah goaankii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'YHT' oo hoos yimaad heshiiska lala galay Jarmalka Siemens [More ...]
Mısra Öz Sel, oo ah hooyadeed wiilkeeda Arda Sel ku weyday shilka tareenka Çorlu, waxay qortay qoraal ay ku jiraan su'aalo ku saabsan Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka. Sel wuxuu u sheegay Wasiirka Gaadiidka Cahit Turhan han Laga bilaabo maalinta 500 [More ...]